Kacha mma ụmụ nwoke na -eji ejiji akwa pullover sweta shirt Manufacturer and Factory | Lọng
Jaketị na jaketị
Uwe ndị na -ere ahịa na -ewu ewu na -ewu ewu
Ụmụ nwanyị Tracksuit Velor Lon ...
Onye Mmebe Nwoke, Bipụta ...
N'ogbe ndị ikom ejiji larịị ...
N'ogbe nwoke ejiji dọpụta ...
Ebumnuche anyị nke mbụ bụ ịgbanwe echiche ndị mmadụ na otu ha si ele ihe anya na ndụ kwa ụbọchị yana n'ime ụwa n'onwe ya. Anyị na -achọ ime nke ahụ site na ịkwanye ezigbo ozi n'akụkụ oge ọ bụla nke uwe anyị wepụtara. Banyere uwe elu, ọ dị mfe uwe ogologo ogologo ogologo olu, anyị na-anwa ime ka ọ dị iche na mbipụta dị iche iche, nke ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu, n'ahịa China, a na-akpọ ya uwe ọdịnala, n'ihi na ọ na-anọchite anya ụdị omenala ụfọdụ site na iji mbipụta dị iche iche. imewe.
“Ma ọ bụrụ na ị gbanwee otú i si ele ihe anya. Ihe ndị ị na -ele anya na -agbanwe ”
Ka oge na -aga maka ndị na -anabata ozi a anyị na -ekerịta ma na -ezube ịga n'ihu na njem ha. nke a dị na njikọta na Lebanong maka ndị na -achọ iwere ozi Lebanong na -ekerịta ma ha bu n'obi ime ihe ha mụtara na ndụ ha n'ọkwa dị elu.
Anyị na -achọ ịgbanwe echiche otu onye otu ụbọchị site n'ịnụ ozi anyị ma kwalite echiche dị mma na nkọwa ndụ site n'inwe echiche sara mbara n'ihe na ịghọta ibe anyị nke ọma. Nke a dị mkpa maka ndị na -eto eto dịka ha ga -abụ ọdịnihu. N'ime ndụ a, anyị ga -abụ mgbanwe anyị chọrọ ịhụ.
Ihe:80%owu/20polyester, owu, ma ọ bụ dị ka arịrịọ gị
Nha:XS-XXXL, anyị nwere ike ịme nha ka ọ bụrụ arịrịọ gị
Agba:Mee dị ka ị jụrụ, ọbara ọbara, ọcha, acha anụnụ anụnụ, wdg. Dị ka arịrịọ gị.
MOQ:50pcs, ị nwere ike hazie ihe nlele iji lelee ogo ya
Akara:1. Akara ebipụtara 2. A kpara akwa 3.Jacquard/embossed logo, wdg.
Nwepụta nke gị dị.
Oge Mbuga ozi:Oge nlele: ụbọchị 5-7; nnukwu oge: ụbọchị 20-25
Ụdị ọkọnọ: 1Afọ 5 nke ọrụ OEM & ODM
Usoro ịkwụ ụgwọ:T/T, L/C
1.More karịa 100KGS: Site n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku
2.Less karịa 100KGS: Site na awara awara, ọrụ n'ụlọ n'ụlọ
3.Dị ka arịrịọ ndị ahịa si chọọ.
Nke gara aga: Gym na-ere mgbatị ahụ egwuregwu nkịtị Casual Knitted Sweater Shirt Pullover nwere mmetụta aka dị nro
Osote: Ndị nwoke na -ere ahịa na -ewu ewu na -eji hoodies ụmụ nwoke nwere akwa ogologo
Owu Pullover Hoodie
Omenala Hoodie Men Pullover Streetwear
Hoodies White Pullover
Sweater ụmụ nwanyị Pullover
Hoodies E Bipụtara & Ekebere eke ...
N'ogbe nwoke ejiji pullover sweta uwe elu ...
N'ogbe nwoke ejiji larịị pullover hoodies cu ...
jụọ ajụjụ ugbu a zụta ugbu a
Ụlọ ọrụ Nanchang Lebang Garment Co., Ltd.